ArangoDB yakavhurwa sosi yakawanda-modhi dhatabhesi system | Linux Vakapindwa muropa
ArangoDB ndeye yakawanda-modhi dhatabhesi yakagadzirirwa naArangoDB GmbH, iyi yakadaidzwa kunzi dhatabhesi kubvira dhatabhesi system inotsigira matatu matatu mamodheru (kiyi / kukosha, zvinyorwa, mifananidzo) ine dhatabhesi musimboti uye yakabatana query mutauro AQL (ArangoDB Query Mutauro). Mutauro wemubvunzo unoshambadza uye unobvumidza kusanganiswa kwenzira dzakasiyana dzekuwana dhata mune mumwe mubvunzo.
ArangoDB iri NoSQL dhatabhesi system asi AQL yakafanana nenzira dzakawanda kuSQL. Dhata dzekuchengetera nzira dzinosangana neAIDID (Atomicity, Consistency, Isolate, Reliability) zvinodiwa, rutsigiro kutengeserana, uye zvinopa zvese zvakatwasuka uye zvekumira scalability.
Pakati pezvakakosha zveArangoDB, tinogona kuwana:
Iko kugona kuzviita pasina kutsanangura dhata rekuchengetedza data (hapana schema) - Iyo data yakarongedzwa muchimiro chemagwaro umo metadata neruzivo nezve chimiro chakaparadzaniswa nedata remushandisi.
Dhizaini-dzakawanda dzakashongedzwa dzinoendesa mutoro kune ese maCPU cores;
Iyo inoshanduka dhata yekuchengetedza modhi mauri maunogona kusanganisa makiyi-ekukosha mapara, magwaro uye ma parameter ayo anoona hukama pakati pezvinyorwa (nzira dzinopihwa kudzivirira materu egirafu);
Mhando dzakasiyana dzekuratidzira dhata (zvinyorwa, machati uye akakosha emaketani emaketani) zvinogona kusanganiswa mumubvunzo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuunganidzwa kwedata rakasiyana;
Joinha rutsigiro rwemubvunzo (JOIN).
Iko kugona kusarudza mhando yeindekisi inoenderana nemabasa ari kugadziriswa (semuenzaniso, unogona kushandisa iyo index yekuzara-zvinyorwa kutsvaga);
Configurable kuvimbika- Iko kunyorera pachako kunogona kuona izvo zvinonyanya kukosha kwazviri: kuvimbika kwepamusoro kana kuita kwepamusoro;
Kuchengetedza kwakanaka, kushandisa zvizere kugona kwemidziyo yazvino (semuenzaniso SSD dhiraivha) uye macache makuru anogona kushandiswa;
Transactions- Iko kugona kumhanyisa mibvunzo yemazhinji magwaro kana kuunganidzwa kamwechete nekusarudzika kwekutenga kupatsanurwa uye kusagadzikana;
Tsigiro yekudzokorora uye kupatsanurwa: iko kugona kwekugadzira tenzi-muranda kumisikidza uye nekuparadzira data maseti kumaseva akasiyana zvichienderana nechero hunhu;
1 Nezve iyo nyowani vhezheni ArangoDB 3.6
2 Maitiro ekuisa ArangoDB paLinux?
Nezve iyo nyowani vhezheni ArangoDB 3.6
ChaizvoizvoIyo dhatabhesi iri mune yayo ArangoDB 3.6 vhezheni, mariri iko kugadzirisa kwekuita kweiyo subqueries kunoratidzwa, pamwe ne UPDATE uye SHANDISA mashandiro.
Uyewo zvakare kuitiswa kwekugona kwekufananidzwa kuitiswa kweQLQL mibvunzo, chii inoderedza nguva yekuunganidza dhata yakagoverwa munzvimbo dzakasiyana dzesumbu.
Zvakare kuitiswa kwekunonoka kugadzirwa kwemagwaro, izvo zvinobvumidza mune mamwe mamiriro ezvinhu kubvisa kudiwa kwekubvisa zvachose zvinyorwa zvisina basa.
Paunenge uchiongorora zvinyorwa, kurasa kwekutanga magwaro asingaenderane nechero firita yakapihwa.
Iyo ArangoSearch yakazara-zvinyorwa zvekutsvaga injini yakagadziridzwa kutsigira kurongedza zvichibva pane kufanana kwedata. Yakawedzera pariser rutsigiro kune auto-yakazara mibvunzo, TOKENS () uye PHRASE () mashandiro akaitwa kwechisimba yekutsvaga kwekutsvaga mubvunzo.
Maitiro ekuisa ArangoDB paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi dhatabhesi pakugovera kwavo kweLinux, unogona kuwana anoenderana mapakeji kune kugoverwa kweLinux kwavanoshandisa kana kodhi yekodhi yekuunganidza kubva chinotevera chinongedzo.
Mariri ivo vanofanirwa kunyoresa kuti vatore ma download link. Nezve izvo zvinyorwa pakuisa uye kushandisa, iyo chinongedzo ndeichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » ArangoDB yakavhurwa sosi yakawanda-modhi dhatabhesi system
Bonsai yeGnome-centric yakawanda-chishandiso sync basa